QORMADA 6AAD: BARASHADA QAARADA AFRICA: WADANKA MORROCO: | Cabays.com
QORMADA 6AAD: BARASHADA QAARADA AFRICA: WADANKA MORROCO:
December 20, 2018 - Written by Saciid Cigaal
Morroco waa wadan kuyaala WAQOOYIGA AFRICA. Waxaanu xad-lawadaagaa wadamo dhawr ah.
Wadanka SPANISHKA waxa uu xad-biyood kalawadaagaa dhinaca waqooyiga,wadanka ALGERIA waxa uu soohdin kala wadaagaa dhinaca bari ,dhanka koonfureedna wadanka MURITANIA. Caasimada wadanka marroco waxaa layidhaa (RABAT) magaalada ugu wayn wadanka marroco na waa (CASABLANCA). Dhulka morocco carabtu waxay utaqaaan (ALMAMLIKATUL QARBIYA) halka luuqada ingiriisiga looga yaqaano(MARRAKESH).
Madax –taabasho lasameeyay 2016 dadka kunool wadanka marroco waxa ay noqdeen (35.28 million qof). Baaxada dhulka marrocana waa (446,550KM2) (172,410 SQMI).
Badanka wadanka Marroco waxaa ku teedsan buuralayda (ATLAS) kuwaas oo ku fidsan badhtanka iyo koonfurta wadanka marroco. Halka buuralayda (RIFT) ay ku teedasanyihiin waqooyiga wadanka marroco. Marroco waa wadanka 57 ee dunida ugu weyn. Xadka u dhaxeeya labada wadan ee ALGERIA IYO MARROCO waxaa laxidhay 1994 ilaa hadana wuu xidhanyahay.
Wadanka MARROCO IYO SPANISH ku waxa ay wadaagaan shan xad oo dhanka bada MEDITERENIAN SEA da ah oo ay kujiraan jasiirada (CHATERIRAS) IYO jasiirada yaree muranku ka taaganyee (PEREJI) xeebta Atlantiga waxa uu xad kala leeyahay wadanka marroco jasiirada (CANARY) ee wadanka SPANISHKA.
Iyo jasiirada (MADEIRA) ee (PORTUQUES) KA oo uu xad kala wadaago dhanka waqooyi ee bada (ATLANTIGA).
Waxa kale oo wadanka marroco xad-kala wadaagaa dhinaca waqooyi gacnka (GIBRALTAR) kaas oo isku xidha labada badood ee (ATLANTIC OCEAN IYO MEDTERNIAN SEA) waxaana mara maraakiibta saxmadaha sida ee ukala gooshaya caalamka.
Dhanka koonfureed ee wadanka waxaa dhaca lamadagaanka (SAHARA) waa dhul ay yaryihiin dadka marroocaanka ah ee kunooli haba yaraatee deegaankaasi malaha wax-soosaar dhaqaale. Badanka dadka marroco waxa waxa ay kunoolyihiin buuralayda waqooyi ee wadanka marroco.
Wadanka waxaa wada guumaystay labada wadan ee( SPANISH IYO FRANCE) waxaanay madax baanidooda kalasoonoqdeen guumays-tayaasha sandku arkuu ahaa (2, MARCH ,1956 ) hadaba 44 sanno oo guumaysi kadib wadanka marroco wuu xoroobay.inkasta oo may marroco xorowday sandkii 1956 ilaa hada SPANISKU waxa ay xoog kuhaystaan laba magaalo oo kamida dhulka marroco. Waana (CENTA IYO MELILLA) ee silsilada jasiiradaa xeebta bada ATLANTIGA ilaa hadana waxa ay gacanta ugu jirtaa wadnka SPANISHKA,
Wadanka MOrroco dadka reer magaalka ah ee magaalooyinka dagani waa 60.4% halka dadka miyiga kunoooli ay yihiin 39.6%. Wadanka ,marroco waa wadan wax-soo-saar leh ,waana wadan isku filnaansho cunto gaadhay. Waxaanu udhoofiyaa suuqyada YURUB (FRUITSKA IYO VEGETABLESKA). Waa wadan warshado leh waxaanu soo-saaraa COMMERCIAL CROPS KA sida( COTTON ,SUGERCANE,SUGARBEETS,SUNFLOWERS).
DIIMAHA WADNKA MARROCO:
93% dadka marroco waa dad muslim suni ah
7% waa wadad ajaanib wadanka kusugan oo CHRISTIAN AH.
JINSIGA DADKA MARROCO:
99% waa dad (CARAB IYO BARBERS AH)
1% waa dadyow kale.
LUUQADAHA WADANKA MARROCO:
ARABIC IYO BARBER: WAA LUUQADA OFFICIALKA U AH WADANKA.
FRENCH: WAA LUUQADA GANACSIGA, DAWLDA IYO DIB-LUMAASIYADA.
SPANISH: WAA LAGAGA HADLAA WAQOOTIGA WADANKA MARROCO.
DIYAARIYE: AADAN CUMAR XUSEEN